Ankadindramamy: Ody gasy, basy lava, sarona tamin’ireo namono polisy | NewsMada
Ankadindramamy: Ody gasy, basy lava, sarona tamin’ireo namono polisy
Voasambotry ny polisin’ny Fip, ny asabotsy teo, ny voalohany. Tratra ny ampitson’io koa ilay faharoa. Odigasy maromaro, basy lava no sarona tamin’ireto roa lahy nandray anjara tamin’ny fitifirana ka nahafaty polisy sy mpandraharaha iray teny Ankadindramamy, herinandro lasa izay.
Saron’ ny polisy avy ao amin’ny hery vonjitaitra eny Antanimora (Fip) teny Ankadindramamy sy Andravoahangy, ny asabotsy 18 sy ny alahady 19 aogositra 2018 teo, ireo jiolahy tompon’antoka tamin’ny fahafatesana mpandraharaha iray sy polisy iray. Araka ny fanazavan’ny polisy, nahazo loharanom-baovao izy ireo fa mihaodihaody eny Ankadindramamy ny iray amin’ireo jiolahy tompon’antoka tamin’ny fitifirana ilay polisin’ny UIR, ny herinandro teo. Voalaza fa efa ela ihany no tsikaritry ny olona nihaodihaody teny Ankadindramamy ity jiolahy ity ka nampiahiahy azy ireo. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny polisy ka hita teo amin’ilay toerana voalazan’ilay nanome loharanom-baovao tokoa ny jiolahy iray, 45 taona, ka nosamborina avy hatrany, ny asabotsy tamin’ny 10 ora maraina. Rehefa nampifanatrehana tamin’ireo olona voatafika ity jiolahy ity, nilaza izy ireo fa tena anisan’ireo jiolahy nanafika azy tokoa ity voasambotry ny polisy ity. Taorian’ny fanadihadian’ny polisy, nanondro ny namany mpiray tsikombakomba aminy ity jiolahy ity ka voasambotra teny Andravoahangy, ny alahady teo, koa ny jiolahy iray hafa.
Mitohy ny “Opération force de frappe”…
Tratra niaraka tamin’ity jiolahy voasambotra farany ity ny antsibe iray. Niroso tamin’ny fisavana ny tranony avy hatrany ny polisy ka nahatrarana basy lava iray calibre 12 sy odigasy maromaro tao an-tranony. Niaiky ireto jiolahy ireto nandritra ny famotorana nataon’ny polisy fa isan’ireo nandray anjara mivantana tamin’ilay fanafihana nahafatesana polisy iray teny Ankadindramamy. Ankoatra ireto jiolahy tratra ireto, mbola misy jiolahy hafa mpiray tsikombakomba amin’izy ireo ary ao anatin’ny fikarohana azy ireo ny polisy amin’izao. Nohamafisin’ny polisy hatrany fa mitohy ny ezaka ataon’izy ireo, indrindra momba ilay hetsika “Opération force de frappe” hiadiana manokana amin’ireo tambajotran-jiolahy mpitam-piadiana mahery vaika. Ireny niaraha-nahita, ny alakamisy lasa teo, ireny ny fandravan’ny zandary sy ny polisy ireo tambajotrana mpanao “kidnapping”. Natolotra ny polisy misahana ny ady heloka bevava (BC) ireto jiolahy ireto ho fanohizana ny fanadihadiana rehetra.